गिजाको प्रमुख समस्या जिन्जिभाइटिस, कसरी बच्ने यसबाट? - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अन्जना पौडेल काठमाडौँ चैत ११
दाँत माझ्दा गिजाबाट रगत आउने समस्याले दिक्क भएका भक्तपुरका अनिस अवाल आफ्नो समस्या लिएर दन्तरोग विशेषज्ञ कहाँ पुगे। तर, उपचारपछि उनले डाक्टरले भनेको मानेनन्। दाँतमा फोहोर जम्मा भएकाले रगत आएको र दाँत सफा गर्नुपर्ने डाक्टरको सुझाब पाए पनि उनी दोहोर्याएर डाक्टरकोमा गएनन्। ‘एकचोटी दाँत सफा गरेपछि ६-६ महिनामा गरिरहनुपर्छ, गरेन भने दाँत निलो, पहेँलो कस्तो कस्तो हुन्छ’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मेरो साथीको पनि त्यस्तै भयो। ६-६ महिनामा कसले दाँत सफा गराइरहन्छ र?’
सुन्निएर दुख्ने र दाँत माझ्दा बेलाबेलामा गिजाबाट रगत बगिरहने भएपछि चेकअप गराएका ललितपुरका पुजन नेपालले पनि डाक्टरको सल्लाह मानेनन्। ‘प्लाक अर्थात् किटाणुको पातलो पत्रले गर्दा गिजा सुन्निएर रगत बगेकाले दाँत सफा गर्नुपर्ने र किराले खाएको ठाँउमा दाँत भर्नुपर्ने डाक्टरको सुझाब थियो। डाक्टरले भनेअनुसार गर्दा उपचार महँगो हुने उनी बताउँछन्। ‘दाँतको उपचार ज्यादै महँगो हुन्छ’, उनले भने, ‘अबदेखि दाँत सफा राख्छु, ठिक भैहाल्छ नि!’
दाँतको उपचार महँगो हुन्छ। दाँत सफा गरेपछि नियमित रुपमा सफा गर्नुपर्छ नत्र झन् फोहोर हुन्छ। दाँत सफा गर्दा दाँतको नशा कमजोर भई दाँत छिटै झर्छ जस्ता सोंच र भ्रम एकथरी मानिसमा रहेको पाइन्छ। यही भ्रमका कारण बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्ममा गिँजा र दाँतको समस्या व्याप्त छ।
हरेक ६÷६ महिनामा आफ्नो र आफ्नो परिवारको दन्त परीक्षण गराउने पनि छन्। तर, नियमित दन्त परीक्षण गराउनेमध्ये पनि धेरैले चिकित्सकको कुरा नसुन्दा दाँतको समस्या गम्भीर बन्दै डाक्टरहरू बताउँछन्।
मानिसको खानपान र जीवनशैलीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। खानपानसँग पहिलो सम्पर्कमा आउने हाम्रो मुख पनि त्यो मामिलामा पछि छैन। सानो मुखमा अनेकौँ ठूला समस्या आइरहने हुन्छन्। मुखभित्र आउने अनेकौँ समस्यामध्ये एउटा सामान्य तर अत्यधिक मानिसहरूमा हुने समस्या हो, जिन्जीभाइटिस। अन्तर्राष्ट्रिय डेन्टल जर्नलले ‘जनस्वास्थ्यका गम्भीर समस्याहरू’को सूचीमा समेत सूचीवद्ध गरेको गिजाको समस्या हाल साना बच्चादेखि वृद्धमा समेत व्याप्त रहेको पाइन्छ।
नेपाल मेडिकल कलेजकी दन्त चिकित्सक संस्कृति खनाल मानिसहरुले गर्ने सामान्य हेलचक्र्याइँका कारण गिजाको समस्या बढ्दै गएको बताउछिन। ‘मुखको प्रमुख समस्या भनेको, दाँतमा कीरा लाग्ने र गिजामा समस्या आउने नै हुन्। खानपानमा ध्यान नदिने, मुखको राम्रो हेरचाह नगर्ने, ठूलो रोग नलागी चिकित्सककोमा नजानेजस्ता सामान्य हेलचक्र्याइँले यस्ता समस्यालाई निम्त्याइरहेको हुन्छ’, डा खनालले भनिन्, ‘गिजाको समस्या, जिन्जीभाइटिसले दुःख दिएका बिरामीहरू अहिले बढ्दो मात्रामा छन्।’
जिन्जिभाइटिस के हो?
गिजा सुन्निने, दुख्ने, गिजाबाट रगत आउनेजस्ता समस्यालाई जिन्जिभाइटिस भनिन्छ। हुन त यो सामान्य रोग हो, जुन केही समयमा आफैँ पनि हराएर जान्छ। तर, पटक–पटक बल्झिएमा वा लामो समयसम्म दुख्ने, सुन्निने भएमा चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ।
‘जिन्जिभाइटिस एक प्रकारको गिजाको समस्या हो, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध ओरल हाइजिन (मुखको स्वास्थ्य) सँग छ’, डा. खनाल भन्छिन्, ‘जिन्जिभाइटिस सामान्य समस्या भए पनि यो बढ्दै गएमा पिरियोडन्टाइटिस हुन्छ, जसले दाँत र हड्डी जोड्ने तन्तुलाई कमजोर बनाउँछ। अनि दाँत बिग्रने, दुख्नेजस्ता समस्या बढ्दै जान्छ।’
जिन्जिभाइटिस हाम्रो सामान्य लापरवाहीले हुन्छ। बढी मात्रामा जंक फुडको प्रयोग हुनु पनि यो रोगको प्रमुख कारण हो। गुलियो खानेकुरा वा टाँसिने खाने कुराले पनि यो समस्या नित्याउँछ।
प्लाक अर्थात किटाणुको पातलो पत्रले गिजा सुन्निने समस्या ल्याउँछ। समयमा प्लाक हटाइएन भने गिजाको भित्रैसम्म किटाणु पसेर समस्यालाई ठूलो बनाइदिन्छ। प्लाक थुप्र्रिँदै गएर टार्टर बनेमा त्यो हटाउन पनि गाह्रो हुने र गिजाको समस्या झन् जटिल हुने चिकित्सक बताउँछन्।
साथै धुम्रपान, मद्यपान र सुर्तीसेवन गिजाको समस्या निम्त्याउने प्रमुख कारण हुन। मधुमेहको नियन्त्रण नगर्नाले पनि गिजाको समस्या बढ्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउने औषधीहरू, गर्भवती महिलामा हुने हर्मोन परिवर्तन आदि पनि समस्याका कारण हुन्। तनावले पनि गिजालाई कमजोर बनाउने हुन्छ।
जिन्जिभाइटिस भएको तुरुन्तै थाहा पाउन सकिँदैन। तर, यसका सामान्य लक्षणहरू भने गिजा दुख्ने, सुन्निने, मुख गनाउने, रगत आउने, खाना खान गाह्रो हुने र खानाको स्वाद नआउने आदि हुन्।
रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो। केही साधारण उपायहरूबाट गिजाको समस्या, जिन्जिभाइटिसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। दाँत ब्रस गर्दाा हल्का तरिकाले गिजामा असर नपर्ने गरि गर्नुपर्छ। बेस्सरी गर्दा गिजामा असर पर्नुका साथै दाँतको रङको माथिल्लो पत्रसमेत निस्कने हुँदा ध्यानपूर्वक ब्रस गर्नुपर्छ। ब्रस गर्दा अलिअलि रगत आएमा आत्तिहाल्नु पर्दैन, बिस्तारै कुल्ला गर्नुपर्छ।
जंकफुड, गुलिया पदार्थ, टाँसिने खानेकुरा कम खाने र खाएपछि ब्रस गर्ने गर्नुपर्छ। धुम्रपान, मद्यपान र सुर्तीसेवनको बानी छ भने तुरुन्तै त्याग्नुपर्छ। तनाव लिनु हुँदैन।
मुखको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु नै यो समस्याको रोकथामको प्रमुख उपाय भएको डा. खनालको भनाइ छ। दाँत माझ्दा फ्लुराइडयुक्त मञ्जन प्रयोग गर्नुपर्ने, दाँत सँगसँगै जिब्रो, गिजा र भित्री गालाको सरसफाईमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ।
जिन्जीभाइटिस रोगका लक्षणहरू देखिनासाथ दन्त चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्ने उनी बताउँछिन।
‘जिन्जीभाइटिस वा गिजाको समस्या शुरुवातकै अवस्थामा छ भने निको पार्न सकिन्छ तर पिरियोडन्टाइटिस भैसकेको अवस्थामा उपचार निकै जटिल हुन्छ’, डा खनाल भन्छिन्, ‘प्लाक र टार्टर हटाउन सकिन्छ र तन्तु र हड्डीको आकार र अवस्था थप बिग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। साधारणतया मुखको समस्यालाई अझैपनि सामान्य नै मानेर बिरामीहरूले त्यति वास्ता गर्दैनन् तर यो निकै गम्भीर विषय भएकोले विशेष ध्यान पु¥याउनै पर्छ।’
प्रकाशित ११ चैत २०७५, सोमबार | 2019-03-25 17:26:20